Salaad Cali Jelle oo si aan caadi aheyn ugu jees jesay kooxda Al-Shabaab +COD | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Salaad Cali Jelle oo si aan caadi aheyn ugu jees jesay kooxda Al-Shabaab +COD
Salaad Cali Jeelle oo kamid ah Siyaasiyiinta Somalia horayna xilal uga soo qabtay Dowladihii Dalka soo maray, ayaa waxa uu ka hadlay Geerida Axmed Godane iyo Hoggaamiyaha Cusub.
Salaad Cali waxa uu sheegay in Geerida Hoggaamiyihii Alshabaab ay sababeyso hoos u dhac baahsan oo ku imaada Jiritaanka iyo Awoodaha Maleeshiyada Alshabaab, waxa uuna Cadeeyay haddii ay dhacdo inay sii jiraan aysan yeelan doonin Awooda ay horay u lahaayen.
‘’Waxaan filaa inay ka waan toobi doonaan falka ay ku jiraan, waayo waxaa tusaale ugu filan Geerida Hoggaamiyahooda waxaa dhamaanaya quraafaadkii ay ku dhex wadeen gudaha Dalka’’ Sidaa waxaa yiri Salaad Cali Jeelle.
Sidoo kale, Salaad Cali ayaa waxa uu sheegay in Hoggaamiyaha Cusub uu yahay mid aan horay loo maqal dhagaha Soomaalidana ku cusub, taasina waxa uu ku sheegay inay noqoneyso Caqabad hortaagan Kooxda oo aan u saamaxeynin inay horay usii gudbaan.
‘’Dilka Axmed Godane waxa uu hoos u dhac ku sameynayaa firfir-coonida Kooxda, waayo si waliba oo ay u magacaaban Hoggaamiye waxaan saamaxeynin wakhtiga iyo awoodaha Kooxda oo ku dhacaaya niyad Jab baahsan’’
Dhanka kale, Salaad Cali Jeelle, ayaa waxa uu Dowlada Federaalka ugu baaqay inay ka faa’iideysato Mashquulka heysta Kooxda oo suuragalin kara inay la wareegaan Deegaanada ay ku harsan yihiin sida Baraawe oo la rumeysan yahay inuu ka jiro xaalad Mashquul oo ku aadan Geerida Godane.